Ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny Prime Prime Day amin'ny 11 Jolay | Androidsis
Alfonso de Frutos | | About us
Amazon dia nanomboka ny varotra manokana miaraka amin'ny Amazon Prime Day 2017. Ny magazay an-tserasera malaza indrindra eran'izao tontolo izao dia manolotra ireo mpampiasa nanao fifanarahana tamin'ny serivisy praiminisitra miaraka amina andiana tolotra tena mamy.
Tamin'ity taona ity dia toa napetrak'i Amazon amin'ny hena rehetra ny hena rehetra mba hanolorana tolotra tsy azo resena ka nanao fanangonana kely izahay ny telefaona finday sy gadget tsara indrindra mba tsy hanadinoanao ny fotoana ahazoana ny varotra.
Ireo no tolotra tsara indrindra amin'ny Amazon Prime Day 2017
Ny varotra lehibe indrindra hitako tamin'ny resaka telefaona dia ny ZTE Axon 7, fitaovana azonao vidiana amin'ny fanaovana kitiho eto amin'ny alàlan'ny Amazon ho an'ny irery ihany 347 euros. Afaka mahita ianao ny fanadihadianay izay anehoanay anao ny tsiambaratelo rehetra amin'ny telefaona tena feno.
Aza adino fa ny ZTE Axon 7 dia manana efijery 5.5-inch, processeur Qualcomm Snapdragon 820, RAM 4GB ary 64GB fitehirizana anatiny, rehetra avo lenta misy kalitaon'ny feo manaitra ary vidiny mamaky tany.
Raha mitady finday Android mora vidy ianao dia hanana ny 11 Jolay ny Moto G5 Plus amin'ny vidiny 219 fotsiny fipihana eto. Telefaona afovoany afovoany ambony misy RAM 3 GB sy efijery Full HD 5.2-inch.
Ho an'ny atletika indrindra, ny Garmin Forerunner 235 dia nidina 30%, manomboka 349 euro ka hatramin'ny 245 euro fotsiny fipihana eto. Akanjo feno tanteraka izay mamela anao hanara-maso ny hetsika ataonao, anisan'izany ny fandrefesana ny tahan'ny fo.
Ary ireo mpitia mozika dia tsy afaka manadino ny fifanarahana Amazon Prime Day mba hisamborana sasany Fanamafisam-peo Vtin Royale inona no azonao atao mividy amin'ny fipihana eto amin'ny 49.99 euro fotsiny. Miaraka amin'ny fahaleovan-tena mandritra ny 8 ora sy famolavolana premium, ireo mpandahateny bluetooth ireo dia hiseho tsara amin'ny lafiny rehetra amin'ny tranonao.
Ahoana ny hevitrao momba ireo tolotra ireo ho an'ny 11 Jolay amin'ny Amazon Prime Day 2017?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny andro voalohany amin'ny Amazon amin'ny 11 Jolay
Fampiharana Android 5 hanararaotra ny fakantsary reflex nomerika (DSLR)